Shiinaha oo ciqaabaya dadka beenta faafiya - BBC Somali
Shiinaha oo ciqaabaya dadka beenta faafiya
31 Agoosto 2015
Image caption Dowladda Shiinaha ayaa xirtay barar badan oo internet ah.
Dalka Shiinaha dadka waxa beenta internetka soo galiya ayaa la kulmaya ciqaab. 197 qof ayaa la ciqaabay kadib markii dowladda ay u aragtay inay war aan sax ahayn internetka soo galiyeen.
165 bar internetyo ayaa la xiray iyadoo dowladda aysan sheegin waqtiga uu socon doono ololahan ugu danbeeyay.
Horaantii bishan siddeed iyo toban jir nin ah ayaa la xiray shan maalmood, kadib markii uu qoray war qalad ah in qaraxii kiimikada ee Tianjin ay ku dhinteen 1300 oo qof.
Dhab ahaan dhimashada waa 150.
Dhinaca kale, wariye u shaqeeya joornaal wax ka qora dhaqaalaha, ayaa la xiray kadib markii uu qoray warbixin saadaalinaysa in dowladda ay joojin doonto lacagta ay ku kabto suuqa saamiyada shirkadaha ee qiimahoodu hoos u dhacayo.
Dowladda ayaa sheegtay inay doonayso inay joojiso wararka internetka la soo galiyo ee beenta ah ee dadka u keena walaaca.
Dadka dhaleeceeya dowladda ayaa ka walaacsan sharciga ay dowladda ku adkaynayso waxa lagu qoro internetka, in loogu tala galay in lagu tir tiro dhaleecooyinka loo soo jeediyo xisbiga hantiwadaaga ee xukunka haya iyo siyaasadiisa.